I-Kubuntu 20.04 LTS sele ikhutshiwe, yazi iindaba zayo | Ubunlog
Ukulandela icandelo lokukhutshwa kweencasa ezahlukeneyo yenguqulo entsha ye Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, kweli nqaku Lixesha lokuba uthethe ngeKubuntu 20.04 LTS lolunye lweencasa zobuntu ezisemthethweni kwaye apho uthotho lweenguqu lubandakanyiwe.
Uninzi lwenu luya kwazi UKubuntu yenye yeencasa zobuntu ezisemthethweni ngokungafaniyo nohlobo oluphambili olusebenzisa imeko ye-desktop yeGnome, Kubuntu isebenzisa imeko-bume ye KDE desktop.
1 Yintoni entsha kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa?
2 Khuphela kwaye ufake iKubuntu 20.04 LTS
Yintoni entsha kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa?
Phakathi kwezinto ezintsha ezibonakalayo yale nguqulo intsha yeKubuntu 20.04 LTS ubukhulu becala iyahambelana Ubuntu 20.04 LTS njengoko zinjalo:
Ukubandakanywa kwenguqulo 5.4 yeLinux Kernel kunye nazo zonke iindaba kunye neempawu zolu hlobo.
Ukusetyenziswa kwe-LZ4 algorithm yokucinezela i-kernel kunye nomfanekiso wokuqala we-boot initramf, ukunciphisa ixesha lokuqalisa ngenxa yokwehla ngokukhawuleza kwedatha.
Ukukwazi ukusebenzisa i-ZFS ukufaka kwisahlulelo seengcambu.
Ukuba ulwabiwo luya kuba neminyaka emi-5 yenkxaso, oko kuthetha ukuba iyahambelana kude kube ngu-2025, ngelixa iinkampani, Ubuntu 20.04 LTS ziya kuhambelana iminyaka eli-10 njenge "inguqulelo yolondolozo eyandisiweyo" (ESM).
Akukho nguqulelo yama-32-bit, inkxaso kuphela igcinwa kwiiphakheji ezihlala kuphela kwifom engama-32 okanye ezifuna iilayibrari ezingama-32, kunye nokudityaniswa kunye nokuhanjiswa kweseti eyahlukileyo yeephakeji ezingama-32 ezinelayibrari.
Yeempawu ezahlukileyo Ubuntu 20.04 LTS ngaphambili eImeko yendawo yedesktop, apho kuthi Kubuntu sinokufumana ingxelo entsha ye KDE Plasma 5.18 LTS Oko kuthetha ukuba Olu hlobo lwendawo ye desktop iya kuhlaziywaa kwaye ugcinea ngabanikeli be KDE kule minyaka mibini izayo.
Malunga neendaba zolu hlobo ibalaselisa ukugcwalisa ngokutsha inkqubo yokwazisa, ukudityaniswa kwezikhangeli, Ukuyila kwakhona useto lwenkqubo, ukuphuculwa kwenkxaso yezicelo zeGTK (usebenzisa izikimu zemibala, ukuxhasa iimenyu zehlabathi, njl.), Ukuphuculwa kolawulo lweenkqubo ezininzi zokubeka esweni, Inkxaso yePlppak "iminyango" yokudityaniswa kwedesktop kunye nokufikelela kuseto, imo yokukhanyisa ebusuku kunye nezixhobo zokulawula izixhobo ezinomboniso weThunderbolt.
Ikwavelele ii sUmnyuli we-emoji ethi isungulwe ngokucinezela isitshixo seMeta (Windows) kunye nesitshixo sexesha (.) Kwaye iya kuvela. Kwicandelo lepasile sinokuyifumana Izicelo ze KDE zibandakanyiwe 19.12.3 kunye Qt 5.12.5 isakhelo.
Olunye utshintsho olubalulekileyo oluvele kule nguqulo intsha yeKubuntu 20.04 yile ngoku uPNgokuzenzekelayo, isidlali somculo se-Elisa 19.12.3 sisetyenzisiwe, endaweni kaCantata.
I-Latte-dock kwakunjalo ihlaziyiwe kwinguqulelo 0.9.10, Inguqulelo entsha ye-KDEConnect 1.4.0 ifakiwe, i-Krita ihlaziyiwe yohlobo lwe-4.2.9, i-Kdevelop 5.5.0. Kwelinye icala, kuyakhankanywa ukuba inkxaso yezicelo ze KDE4 kunye ne Qt4 ziyekile.
Kwaye yintoni enye Iseshoni yovavanyo esekwe kwiWayland yacetyiswa (Emva kokufaka ipakethe ye-plasma-workspace-wayland, into ekhethiweyo "Plasma (Wayland)" ibonakala kwisikrini sokungena ngemvume).
Okokugqibela ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo Ngokumalunga nale nguqulo intsha ye-Kubuntu 20.04 LTS, unokukhuphela umfanekiso wenkqubo kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye uyifake kwikhompyuter yakho okanye kumatshini obonakalayo ukuze wazi yonke into enikezelwa yile nguqulo intsha ye-LTS yenkqubo.
Khuphela kwaye ufake iKubuntu 20.04 LTS
Kulungiselelwe abo banomdla wokukhuphela le nguqulo intsha ye-Kubuntu 20.04 LTS, baya kuba nakho ukuyenza kwiindawo zokugcina Ubuntu, ikhonkco yile enye. Kuba amakhonkco okhuphelo lwenguqulelo entsha engekahlaziywa kwiphepha elisemthethweni leBuntu, kungcono ukuvula i-terminal kwaye uchwetheze umyalelo «sudo do-release-upgrade». Ukuba le nguqulo intsha ayiveli, inokuhlaziywa ngokufaka "umphathi-wohlaziyo" kwaye usebenzise umyalelo "wokuhlaziya-umphathi -c -d".
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuba ufumana isantya esisezantsi ekukhupheleni komfanekiso wenkqubo, unokukhetha ukuyikhuphela ngomjelo, kuba ikhawuleza kakhulu.
Ukugcina umfanekiso wenkqubo ungasebenzisa i-Etcher.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Kubuntu 20.04 LTS sele ikhutshiwe, yazi ukuba yintoni entsha
Ndizamile ukubuntu 20 njengoko i-19.10 iphelelwe yinkxaso kungekudala. Ndihlala kubuntu ixesha elide kwaye yi-OS yam emiselweyo kwaye ndiyisebenzisa ngokugqibeleleyo nge-100%. Ummangaliso wam ongathandekiyo kukuba xa ndiyifaka ndiyabona ukuba ayinxibelelanisi ikhadi lenethiwekhi. Ukuphanda ndiqinisekisa ukuba ingxaki ikwi-kernel 5.4 kuba kwenzeka into efanayo kuzo zonke ii-distros ezisekwe kuyo.
Kwafuneka "ndibuyele umva" kwaye ndifake i-kubuntu 18.04.
Enkosi ngokwabelana ngamava akho. Ngapha koko, ndihlala ndilinde uguqulelo .1 ukutshintsha ukusuka kwi-LTS.
Izicelo ze-KDE 20.04 iza nezinto ezininzi ezintsha kwi-Elisa, iDolphin, iKdenlive kunye nolunye usetyenziso
Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ilapha kwaye zezi ziindaba zayo